ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖိုင်များကို - ကျနော်တို့စပိန်နိုင်ငံလုပ်နေကြတယ်
စပိန်, ပြင်သစ်, ဂျာမနီနှင့်ပိုပြီးအတွက်ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသို့သွားရောက်ခြင်း! သငျသညျစပိန်နှင့်ကမ္ဘာကနေစပျစ်ရည်ကိုကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာမှရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးခရီးစဉ်, အရသာ, ပုံပြင်များနှင့် sommeliers ။
တွင် Posted 21 မတ်လ 2019 21 မတ်လ 2019 By HBမှတ်ချက်
ဒါဟာအမြဲဝိုင်ဖြူသို့မဟုတ်ပန်းရောင်အဘို့ကောင်းသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်နေရောင်နှင့်နွေဦး၏နောက်ဆက်တွဲနွေးထွေးမှုယနေ့စပျစ်ရည် သာ. ကောင်းသည် Cooler စေသည်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ 22 ဒီဂရီနှင့်Albariñoတစ်ဖန်နှင့်အတူတကယ်ဖြစ်ပါသည် - ကနေရောင်ထဲမှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအစာစား, တစ်ဦးကြွယ်ဝသော 24 သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ဆက်ဖတ်ရန်
တွင် Posted 12 မတ်လ 2019 12 မတ်လ 2019 By HBမှတ်ချက်
ဖခင်များနေ့လာမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ၌အရေးကြီးဆုံးလူကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်၏သေးငယ်တဲ့လက္ခဏာသက်သေပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလူတစ်သူကိုအစဉ်အမြဲအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူရှိခဲ့သည်နှင့်အကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနှင့်ပညာရှင်ပီသစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ညွှန်းသည်။ သငျသညျကွညျ့ရှုရှိရာတစ်ဦးကသူရဲကောင်းကြည့်။ ဆက်ဖတ်ရန်